Lovell Rugby Iikhowudi zekhuphoni
I-20% icinyiwe Okwangoku, i-CouponAnnie ine-16 yeengxoxo malunga neLovell Rugby, ebandakanya kodwa ingaphelelanga kwikhowudi yesaphulelo esi-2, isivumelwano se-14, kunye ne-3 yokuhanjiswa simahla. Ngesaphulelo esiphakathi se-17% isaphulelo, abathengi banokubamba izisulu ezintle ukuya kuthi ga kwi-35% isaphulelo. Esona sivumelwano sisesona silungileyo sikhoyo ngoku yi-35% isaphulelo "seBritish neIrish Lions".
Iipesenti ezili-15 ziphume kwiTechnology yeQela kunye nokuLawulwa kweePad zePed Unikelo lwangoku nje lweLovell Rugby yase-UK eziPhezulu: Iipesenti ezingama-66 zikhupha ii-Se7ens ezipheleleyo zombhoxo oHooded Sweat Grey. I-15% yeTechnology yeQela kunye nokuLawula iiMiyalelo zePad. Zizonke izibonelelo. Iikhowudi zekhuphoni. 16.
Iipesenti ezingama-10 zicinyiwe kwizibuko Ikhuphoni ephezulu kubandakanya iUpto 50% yeSaphulelo | Ukuthengiswa kukaMbhoxo weLovell ngo-Agasti 2021 & 48% kucinyiwe- Ikhuphoni ye-Lovell-rugby.co.uk. Isibonelelo esikhethekileyo, Jonga isaphulelo seepesenti ezingama-30 kwi-canterbury yeengonyama zaseBritane nezaseIreland ezipheleleyo ze-hoodie mens. Fumana isaphulelo se-26% xa uthenga i-canterbury yaseBritane kunye neIrish Lions yehempe ebomvu ebomvu.
I-25% ikhutshiwe kwii-Singlets ezikhethiweyo, iiglasi zelanga kunye neeShoti Fumana ikhuphoni oyithandayo ngokusebenzisa iikhowudi zekhuphoni zeRovell Rugby ezingama-21 ezishushu nezishushu. Thenga ku-lovell-rugby.co.uk kwaye ufumane ukonga olongezelelekileyo ekuthengeni kwakho ngeekhowudi zokupasa zangoku zeLovell Rugby kunye nokwenyusa. Nantsi eyona ntengiso intle: IKrisimesi: I-10% yeLovell Rugby Uk.